मेरो पहिलो प्रेम पत्र « Deshko News
मेरो पहिलो प्रेम पत्र
कोरेर तिमीलाई मायाको, भिक माग्दै छु.!
मेरो रोजाइ मा मन परेकी सानु
.. न्यानो माया अनि मिठो सम्झना .! सानु जीवनमा पहिलो प्रेमपत्र तिम्रो नाममा कोर्दैछु । तिम्रो न्यानो स्नेह र साथको आशमा। सायद तिम्रो मायामा म नजानिँदै फस्दैछु र मलाई साहरा दिइ बचाउने पनि मात्र तिमी छौ यो संसारमा। के मेरो समीपमा आएर मेरो माया स्वीकार्छौ भन्ने आशा लिएको छु.! सानु
तिमीमा, र केवल तिमीमा। पूर्ण रूपमा समाहित भएर, बस् तिमीसँग । ती नीलो सागर सिंगै बोक्ने तिम्रो नयन, त्यो हँसिलो र प्रज्वलित मुखमण्डल अनि मधुर मुस्कान देख्दा लाग्छ तिमी मानव नभएर साक्षात ईश्वरको प्रतिबिम्ब हौ । तिम्रो निकटता कल्पिँदा संसारका सबै सुख र खुसीहरु मेरा पाउमा झुकिरहेका छन् झैँ लाग्छ। के छ खास तिम्रो मुस्कानमा, जसले हरक्षण मलाई पागल अनि पागल बनाउँदै लगिरहेको छ। तर यो पागलपन, उफ ! कस्तो आनन्दको आभास। तिमीलाई एउटा कुरो भनौं? मेरा आँखाहरू तिमीलाई नै खोजिरहन्छन्, हरक्षण। तिमी हिँड्ने बाटोमा मेरा नजर बिछ्याएर बसिरहन्छु म। केवल तिमीलाई लुकेरै नियाल्न।
मैले लिने हरेक श्वासमा तिम्रो प्रेमको मीठो वासनाको अनुभव गर्छु म। मेरो मुटुको हर धड्कन तिम्रै नाममा धड्किरहेका हुन्छन्। यी ओठ, केवल तिम्रो नाम पुकारिरहेका हुन्छन्। के तिमीले सुनेकी छौ सानु मेरो दिलको आवाज? मेरो मनमा प्रवाहित तरङ्ग तिम्रो मनसम्म आइपुगेका छन्? तर जेहोस्, म यो सानो पत्र तिम्रो नाममा कोर्दैछु, एउटा झिनो आशमा कि तिमीले एकदिन मेरो भावना बुझ्नेछौ। मेरो मनको चाहनालाई चिहान बन्न दिनेछैनौ। तर, यो त मात्र मेरो मनको आस न हो, जुन पूरा नहुन पनि सक्छ।
तिम्रो न्यानो काखमा असीम माया पोखिदिनेछु छताछुल्ल हुने गरी, अनि हराउनेछु तिमीभित्र। अस्वीकारै गरेपनि म दु:खी हुने छैन। मलाई थाहा छ, मैले तिमीलाई निस्वार्थ प्रेम गरेको छु। मैले मेरा हरेक श्वासका झोंक्का तिमीप्रति समर्पित छ। अनि अत्यन्तै प्रगाढ र गाढा। म तिमीप्रतिको प्रेमले मेरा हरेक अवयवहरुमा सीञ्चित गरेर राख्नेछु अनि जिउने प्रयास गर्नेछु तिम्रै प्रेममा। मेरो मायामा स्वार्थ नै छैन अनि मैले तिमीलाई जबर्जस्ती पाउने चेष्ठा गरेको पनि छैन।
रमेश थापा ( घोरेटार भोजपुर )